ကလေးတွေနဲ့အတူတူရှိမယ့်အချိန်တွေ နည်းလာပြီမို့ ဝမ်းနည်းနေတဲ့ မေမေသက်မွန်မြင့် - Cele Gabar
By RainowPosted on July 21, 2020
ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော်မင်းသမီးချောလေး သက်မွန်မြင့်ကတော့ ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့မိခင်ဖြစ်ပေမယ့် လုံးဝမလျော့သွားတဲ့ အနုပညာအရည်အချင်းတွေချပြနေသူတစ်ယောက်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ကို အဆီမတက်အောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့အပြင် ကလေးယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်း ကောင်းမွန်တဲ့အနုပညာအရည်အသွေးတွေနဲ့ တောက်ပတဲ့ကြယ်တစ်ပွင့်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်စဲသူတစ်ယောက်ပါ။
အောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်တစ်ယောက်နဲ့ မိခင်ကောင်းတစ်ယောက် ရပ်တည်မှုနှစ်ခုကြားဘက်မျှနေဖို့ အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ချစ်သက်ကတော့ ကိုဗစ်ကာလ အလုပ်တွေရပ်နားထားတဲ့ကာလမှာ ကလေးတွေအတွက်ပိုအချိန်ပေးဖြစ်နေပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သားလေးနဲ့ သမီးလေးအကြောင်းကို ပရိသတ်တွေကိုလည်း မျှဝေပေးနေသူပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်၊ အလုပ်တွေပြန်စတော့မှာမို့ တွေ့ဖို့အချိန်နည်းလာတဲ့အကြောင်းကို ဗွီဒီယိုလေးနဲ့စိတ်မကောင်းစွာ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
ကလေးတွေ ကျောင်းတက်မှာပြင်ဆင်ပေးရတော့မယ့် မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကို “ဒီလိုကျတော့… ချစ်လည်းချစ်တယ်… ဝမ်းလည်း နည်းသလိုပဲ…. အဲ့လိုလေးတွေ ပြင်ဆင်ပေးရမှာ ပျော်ပေမယ့် ကျောင်းတက်တဲ့အရွယ်တောင် ရောက်နေကြပြီဆိုတော့ ဒီရှေ့လျှောက် တနေကုန် ခွဲရတော့မယ်…. ညဆိုလည်း စာလုပ်ရမှာနဲ့ စောအိပ်ရမှာနဲ့…. ကိုယ်တွေ အလုပ်နဲ့က တူတူ အချိန်ကုန်ရတာတွေ လျော့ကုန်ပြီ…ကြိုလွမ်းနေပါပြီ” ဆိုပြီး ဝမ်းနည်းစွာမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြည့်နဲ့ ကလေးတွေ့နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာရိုက်ကူးထားတဲ့ ချစ်စရာဗွီဒီယိုလေးကို ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်နော်။
Source – Thet Mon Myint
Posted in Cele NewsTagged Cele, Cele Gabar, Cele Myanmar, Celebrities, Celebrities Myanmar, Celebrity, Celebrity Myanmar, Myanmar Cele, Myanmar Celebrities, Myanmar Celebrity, Thet Mon Myint, ဆယ်လီ, ဆယ်လီကမ္ဘာ, ဆယ်လီမြန်မာ, မြန်မာဆယ်လီ, သက်မွန်မြင့်
Previous post JOOX ရဲ့ နံပါတ်တစ်နေရာကို ရရှိထားတဲ့ (၇)ပုဒ်မြောက်သီချင်းလေးကြောင့် ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေတဲ့ အားတီ
Next post ပရိသတ်တစ်ယောက်ပို့ပေးတဲ့ လက်ဆောင်လေးကို သဘောကျနေတဲ့ ဆုအိမ့်စံ